पल-मलिकाले अब ६ महिना भिडियो खेल्न नपाउने
नेपाली चर्चित नायक हुन् पल शाह र साथै हालै केहि महिना अघि सार्वजनिक गरिएकाे दुइ गीतले निकै चर्चा चुलायाे । पल र मलिका महत्तलाई लिएर केन्द्र मोशन पिक्चर्सले दुई वटा म्यूजिक भिडियो तयार गर्यो ।
‘फुलबुट्टे सारीको महिला भर्सन र टाढा भएपनि’ बोलको गीतमा पल र मलिकाले अभिनय गरेका थिए । यी दुबै गीतले दर्शकको निकै साथ पाए । दर्शकले रुचाएको यो जोडीलाई अब भने केन्द्र मोशन पिक्चर्सले नयाँ संझौतामा बाँधेको छ । यी दुई कलाकारसँग केन्द्र मोशनले नयाँ संझौता गरेको वुझिएको छ ।
अब, पल र मलिकाले ६ महिनासम्म केन्द्र मोशन बाहेकको कम्पनीसँग एकसाथ म्यूजिक भिडियोमा काम गर्न पाउने छैनन् । केन्द्र मोशनले ६ महिनामा १० वटा भिडियो बनाउने गरि पल र मलिकासँग संझौता गरेको हो ।
पल र मलिकाले अलग–अलग रुपमा अन्य कम्पनीका भिडियो गर्न पाउनेछन् । तर, एकसाथ जोडीको रुपमा भने उनीहरुले ६ महिनाका लागि केन्द्र मोशनसँग संझौतामा बाँधिएका छन् । नायिका मलिका महत्त परिक्षाको तयारीमा रहेकाले पनि नयाँ भिडियोको छायांकन सुरु हुन पाएको छैन ।
केन्द्र मोशनले पल र मलिकालाई लिएर चलचित्र बनाउने तयारी पनि थालेको छ । ६ महिना भित्रमा स्क्रिप्ट फाइनल गरेर चलचित्र सुरु गर्ने योजनामा यो कम्पनी रहेको वुझिएको छ ।
यो पनि – के तपाइमा छिट्टै बिर्सने बानी छ ? तुरून्त खानुहोस् यी १० खानेकुरा
के तपाइँमा छिट्टै बिर्सिहाल्ने बानी छ ? वैज्ञानिकहरुले यस्तो धेरै भुल्ने समस्याको कारण खास पौष्टिक तत्वको कमी रहेको बताउँदै आएका छन्।
दिनहुँ ओखर सेवन गर्नले स्मरण शक्तिको बढोत्तरी हुन्छ
दालचिनी, मरिच चिया, कफी तथा बेसारः
बेसार, चिया, कफी, दालचिनी तथा मरिचको नियमित सेवन समेत मस्तिष्कको क्षमता वृद्धिमा सहयोगी हुने विभिन्न वैज्ञानिक परीक्षणले पुष्टि गरेका छन् ।
दिनहुँ ओखर सेवन गर्नले स्मरण शक्तिको बढोत्तरी हुन्छ । ओखरमा ओमेगा थ्री फ्याट्टी अम्ल, प्रोटिन, फाइबर, एन्टी अक्सिडेन्ट जस्ता आवश्यक तत्व पाइन्छ ।
स्ट्रबरीः यसमा प्रशस्त मात्रामा एन्टी अक्सिडेन्ट पाइन्छ जसले मस्तिष्कका कोषको क्षयिकरण हुनबाट बचाउँछ ।
दहीमा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, चिल्लो, क्याल्सियम तथा फोस्फोरस जस्ता लवणहरु पाइन्छ । यसले सरीरमा लाभदायी जिवाणुलाई समेत फाइदा पुर्याउँछ भने हानिकारक जिवाणुलाई नष्ट गर्न सहयोग गर्छ । दहीमा एमिनो ए-सिड पाइन्छ जसले दिमागी तनाव कम गरी स्मरण शक्तिमा बढोत्तरी गर्न सघाउ पूराउँछ ।
गोलभेँडामा प्रोटिन, भिटामिन, तथा विभिन्न खाले लवण जस्ता तत्व पाइन्छ । यसमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा कम हुन्छ । गोलभेँडामा हुने लाइकोपिन तत्वले सरीरमा स्वतन्त्र रेडिकल्सको सुरक्षा गर्दछ र मस्तिष्क कोषको क्षयिकरण रोक्दछ ।
मसलाको रुपमा तुलसीका पातको प्रयोग निकै लाभदायक हुन्छ । छिटो भुल्ने समस्या भएका मानिसले दिनदिनै तुलसीको पात खाँदा त्यसले फाइदा गर्छ ।
अलैँचीः यसमा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन तथा फाइबर हुने भएकाले यसको सेवन समेत मस्तिष्कको स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ ।
जाइफलः जाइफलको सेवनले सरीरलाई चिसोबाट बचाउने मात्र होइन यसमा हुने विशेष तत्वले मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्न तथा स्मरण शक्ति बढाउन सहयोग गर्छ ।
प्रकाशित मिति March 26, 2021